darafkii difaaca jilicsan - Shiinaha Shandong Chen lu
darafkii difaaca jilicsan
HB07 darafkii ilaaliya (hal dhinac)
sooc: L, M, s
oo u dhiganta Lead: 0,35 MMPB iyo 0.5mmpb;
The darafkii ilaaliya caafimaad X-ray (darafkii) laga sameeyey caag dabiiciga ah oo tayo sare leh iyo budada huruud ah.
Nooca I waa ka weyn yahay ama la mid ah (0,25 MMPB), nooca II waa ka weyn yahay (0,35 MMPB), nooca III waa ka weyn yahay (0.5 MMPB).
Qoraalkani wuxuu ku ilaaliya loo isticmaalo darafkii waa in uu ahaado jilicsan sida cover iyo dhar ah qabanaya. U dhigma attenuation darafka iftiinka iyo nuurka darafkii lifaaqan aagga oo idil waa ka weyn yahay 0,25 MMPB. U dhigma attenuation waslad hore ee darafkii culus oo darafkii xiran culus waa ka weyn yahay 0,35 MMPB. Inta kale ee u dhigma attenuation waa in ka sii badan tahay 0,25 MMPB.
Waxyaabaha ugu weyn ee aan:
ilaalinta jirka Human waxyaabaha ugu muhiimsan: X-ray dharka dhar badbaadin hogaanka, X-ray darafkii ilaaliya, muraayadaha keeni, safaleeti hogaanka, hogaanka cap, gacmo gashi hogaanka, keeni gashi, ilaalinta gonadal, ilaalinta naaska, askartu gacanta, hub ilaalinta , iwm
waxyaabaha ugu muhiimsan ee qalabka la isaga difaaco: screen hogaanka mobile, ganaax screen hogaanka, daah sariirta, daah hogaanka mobile, galaas hogaanka iyo sahayda kaabayaal ah oo la xiriira.
Previous: gaari duro Medical
Next: Semi-darafta hal dhinac jubbadda hogaanka jilicsan
Factory Dharka Lead Price
Factory Supply Shucaaca Dhar Lead
Half-darafta Maro Lead
Lead Medical Dhar
Jaakada Medical Protection Shucaaca
Nooca New Of Single dhinac Protective darafkii
Dharka Protection Lead
Jaakada Lead Protection
Dharka Lead Protective
Coat Medical Protective
Dharka Shucaaca Lead
Lead Shucaaca Dhar
Habboon Protection Shucaaca
Dhar Lead Shucaaca-caddayn
Single dhinac New Protective Short darafkii
Single dhinac Protective Short darafkii
Single dhinac Protective darafkii
Single dhinac Protective darafkii Iyadoo Import Waxyaabaha
Single dhinac jilicsan Protective Short darafkii
Single dhinac jilicsan Protective darafkii
Single dhinac jilicsan Split Protective galkeeda darafkii
Single dhinac Super jilicsan Protective darafkii
Lead Split maro
Split Single dhinac oo gacmo gaab darafkii
Dharka Protective Qalliinka
X Ray Dhar
X Ray Ilaalinta Dhar
X Ray Protection Dhar Lead
Dharka Lead X Ray Shucaaca-caddayn
X-Ray Protective Dhar Lead
Raajo Dhar Lead
Raajo Protective Dhar
nooca cusub ee gacanta ilaaliya hogaanka Chen lu ee ...